Fonooyin Bilaash ah oo loogu talagalay Naqshadayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa mid kale xulashada noocyada bilaashka ah Loogu talagalay naqshadeeyayaasha, kiiskan waxaan la imaaneynaa xulasho xarfaha ah, in kasta oo cinwaanka boostada ay ku qoran tahay naqshadeeyayaasha, waxay u adeegaan dhammaan noocyada dhagaystayaasha, kiiskan waxaan ku samaynay xulasho xarfo nooc lacag la’aan ah kiiskan oo si aad ah diirada loogu saaray isticmaal bandhigay.
Ilahaani waxay na siinayaan ciyaaro badan oo aan ka yeelno kuwayaga mashaariic badan oo layaableh, ilahaan waxaa loo isticmaali karaa casharka aan soo jeedinay maalmo kahor sida loo bixiyo saameyn biyo-biyood ku leh qoraalkeennaTababarkan waxaad sidoo kale ku siin kartaa qoraallo kala duwan qoraalkaaga.
Farta ugu horeysa ee aan kuu keenayno ayaa ah tan soo jiidashada leh bandhig wareegsanIyada oo hawo caadi ah leh, waxay na siineysaa ciyaaro badan si aan u siino mashaariicdeena taabasho aan rasmi ahayn. Nooca qoraalka uu abuuray Victor berbel Naqshadeeye UI / UX wuxuu leeyahay tayo farsamo oo weyn, marka waa ikhtiyaar wanaagsan shaqooyinkeenna midkoodna.
Waad soo dejisan kartaa xarfaha Boros Halkan.
Waa la ogyahay burush ama burush noocyo cayn ah "Qoraalka cadayga" waa sii kordhayaan moodada, laakiin markaan raadineyno shabakadda waxaan marwalba ogaannaa in badankoodna aysan haysan tayo badan, kiiskan Selima waxaa abuuray Jroh Hal abuur wuxuu leeyahay tayo noo ogolaaneysa inaan ku isticmaalno shaqo kasta, xitaa in la abuuro a saameyn biyo-biyood ku leh qoraalkeenna.
Waad soo dejisan kartaa font Selima Halkan.
Sadistic waa mid ka mid ah ilahaas kuwa siiya a saameyn weyn ku leh shaqadaada, fartaan waxaa abuuray Andreas Leonidou Waxaa ku dhiirrigeliyay farta laga sameeyay xagxagashada taas oo ka dhigaysa font-kan shaqsiyeed iyo mid gaar ah.
Waad soo dejisan kartaa farta Sadistic Halkan.
Ka dib xarfo badan oo bandhig ah waxaan doonayay inaan xoogaa keensado rasmi ah Xaaladdan oo kale premium, Ra'iisul waa far qoraal farsamo loogu talagalay Max’ed Pirsky .
Waad soo dejisan kartaa font Prime aquí.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Fonooyin Bilaash ah oo loogu talagalay Naqshadayaasha
ilaha waa wax weyn, mahadsanid.